Kheyraadka Qoyska - Rosemount-Apple Valley-Eagan ISD 196
CUSUB ee waalidka (Somali)
Helitaanka Taageerada loogu talagalay Schoology
Tilmaamaha Dejinta Marinka
Xulo mid ka mid ah marinnada soo-galitaanka soo socda ee tilmaamaha sida loo dejiyo ama loo galo marinka.
Caawimaad, fadlan la xiriir dugsiga ilmahaaga.
Tilmaamaha Af-soomaaliga MyPaymentsPlus>
Tilmaamaha Af-soomaaliga Paypams >
TILMAAMAHA XISAABTA QOYSKA
Marka ugu horeysa ee isticmaaleyaashu waxay ubaahan doonaan lambarka helitaanka waalidka si loo sameeyo koontadaada Schoology. Fadlan la xiriir dugsiga ilmahaaga ama emayl schoology@district196.org si aad u hesho lambar.
Helitaanka Taageerada Schoology >
TILMAAMAHA HELISTA ARDAYGA
Ardaydu waxay ku galaan magaca iyo lambarka sirta ah ee iskuulku bixiyo.
Dib loo eegay 2021-22 Kaalandarka Sannad Dugsiyeedka
Dib loo eegay 2022-23 Kaalandarka Sannad Dugsiyeedka
Ku Xidhnow Degmada 196 iyo Dugsigaaga
Degmada 196 iyo dugsiga ilmahaaga waxay isticmaalaan qalab isgaarsiineed oo kala duwan si ay qoysaska ula wadaagaan cusbooneysiinta iyo macluumaadka. Labada hab ee isgaarsiinta ugu muhiimsan waa iimaylka iyo baraha bulshada.
1. Hubso inaad si joogto ah u hubinaysid iimaylkaaga maadaama cusbooneysiinta muhiimka ah iyo macluumaadka lagu wadaagayo iimaylka si joogto ah degma iyo dugsigaaga labadaba.
2. La-soco Degmada 196 ee baraha bulshada.
3. Isa-sajil si aad uhesho warsidaha Supt's News e-newsletter
4. Ka-doorbid si aad u hesho Farriimaha Qoraalka (*Kaliya nambarada SMS-ka ee ku qoran liistada Nidaamka macluumaadka ardayda ee Infinite Campus ayaa heli kara qoraallada.)
Degmada 196 waxay u isticmaashaa qoraalka sida habka isgaarsiinta. Qoraallada waxaa lagu soo gudbiyaa iyadoo la adeegsanay SchoolMessenger, oo ah adeegga ogeysiinta ballaaran ee degmadu u isticmaasho wicitaannada taleefannada iyo farriimaha iimayalka. Waalidiinta / dadka ardayda masuulka ka ah waa inay doortaan inay helaan fariimaha qoraalka ah.
U dir Y illaa 67587, waxaad heli doontaa farriin xaqiijin ah oo sheegaysa inaad ka diiwaangashan tahay inaad ku hesho ogeysiisyada SchoolMessenger ee loo maro qoraalka. (Haddii aadan helin farriin xaqiijin ah ama waxa u muuqda fariin qalad ah, waxay u badan tahay inay ka dhigan tahay in qoraalka gaaban ee qoraalka uusan ku habboonayn qorshahaaga wireless.)
Wixii macluumaad caawimaad ah, u qor HELP 67587.
Si aad uga baxdo wakhti kasta, u dir qoraalka STOP 67587.
5. Infinite Campus - Waalidiinta/mas'uuliyiinta dhamaystira dib -u -eegista xogta sanadlaha ah ee Infinite Campus, waxay fursad u heli doonaan inay doortaa Luqadda ay kuhalaan waalidka iyo qofkasta oo masuul ka ah ilmaha oo ka tirsan qoyskooda. Soo gal akoon kaaga Campus -markasta
Arrimaha Caafimaadka Dhimirka Ilaha Caafimaadka Dhimirka ee Degmada Dakota